Dutchtown, St. Louis, MO • Dutchtown အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Dutchtown သည် St. Louis ၏တောင်ဘက်ခြမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူးဝစ္စ၏လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးသောရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုမတူကွဲပြားစွာလက်ခံပြီး Dutchtown ကိုလူမျိုး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေးနောက်ခံ၊ မည်သည့်အချက်ကြောင့်မဆိုလူတိုင်းအတွက်နေထိုင်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေရန်ကြီးမားသောအစီအစဉ်များရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ်.
ခိုင်မာသောရပ်ကွက်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသူတိုင်းအတွက်အရှိန်အဟုန်များစွာရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလာလည်ပါ။ သင့်ကိုသင်ပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလာမယ့်တံခါးကိုအတွက်ရွှေ့ပါ။ ဒီမှာသင့်လုပ်ငန်းကိုဖွင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်း၏အနာဂတ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ Dutchtown မှာလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်စာရင်းရရှိပါသည် ရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်မြို့အရင်းအမြစ်များမှလမ်းညွှန်များ Citizens 'Service Bureau ကိုဆက်သွယ်ခြင်း, သင်၏အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကျွမ်းကျင်သူနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း, ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူအစီရင်ခံစာများဖြည့်စွက်နှင့်ပိုပြီး။
bookmark dutchtownstl.org/resources တစ် ဦး နေရာလေးကိုရည်ညွှန်းသည်။
Dutchtown ကိုနေထိုင်ရန်ပိုကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ကူညီပေးရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်မတီများထဲကတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းပါ:
ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗိသုကာ၊ ပန်းခြံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ပါ Dutchtown အကြောင်း စာမျက်နှာ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းပြီးသင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူပြုသောလမ်းလျှောက်လမ်းညွှန်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ အလည်အပတ် dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာထုတ်စစ်ဆေးပါ အရင်းအမြစ်များစာရင်း နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Google စတင်ရယူခြင်းလမ်းညွှန်.
Marquette Park ရှိဖူဆယ်
Marquette Park ရှိဖူဆယ်ကွင်းအသစ်ကိုကြည့်ပါ။ စိန့်လူးဝစ် CITY SC နှင့်အခြားပံ့ပိုးကူညီသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွဲမှုအကြောင်းဖတ်ပုံကိုလေ့လာပါ။
DutchtownSTL.org ၏သတင်း၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အချက်အလက်များကိုစပိန်၊ ဗီယက်နမ်၊ အာရဗီ၊ နီပေါလ်နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ the ကိုနှိပ်ပါ ဘာသာပြန် စာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသောအိမ်နီးချင်းများသည်ခိုင်မာသောအသိုင်းအဝိုင်း၏ကျောရိုးဖြစ်သည်။ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုသည်မည်မျှပင်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်အလွတ်သဘောဖွဲ့စည်းထားသည်ဖြစ်စေလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဗေဒကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ အိမ်နီးချင်းအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုမည်သို့စုစည်းရမည်ကိုလေ့လာပါ dutchtownstl.org/blocks.
ငါတို့ရပြီ သငျသညျအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်နှင့် plug ကိုကူညီရန်အရင်းအမြစ်များ သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းရန်။
COVID-19 ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးထိခိုက်မှုရှိပါသလား။ စိန့်လူးဝစ္စမြို့မှရရှိသောထောက်ပံ့ငွေများအကြောင်းကိုရှာဖွေပါ dutchtownstl.org/grants.
Dutchtown Main Streets သို့လှူဒါန်းပါ
ရန်အလှူရှင်ဖြစ်လာ Dutchtown ပင်မလမ်းများ! ဒေါ်လာတိုင်းသည် Dutchtown Main Streets ကိုကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက်အောင်မြင်သော Dutchtown တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည်။ တစ်ကြိမ်သာသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲလှူဒါန်းမှုလုပ်ပါ.
Dutchtown inရိယာထဲမှာအကြီးဆုံးဥယျာဉ်, ငါတို့လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ပါတယ် Marquette ပန်းခြံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်း၏အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်း။ ပန်းခြံမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲ၊ ဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာရှာဖွေပါ Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များ ပန်းခြံကိုပြန်လည်အသက်သွင်း။
အဆိုပါ Dutchtown ပြက္ခဒိန်
Dutchtown မှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေတယ်။ အလည်အပတ် Dutchtownstl.org/calendar ရပ်ကွက်အစည်းအဝေးများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ၊ အတန်းများ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များနှင့်အခြားနည်းလမ်းများစွာရှာဖွေရန် ထွက်၍ သင်၏အိမ်နီးချင်းများကိုတွေ့သဖြင့်၊.
သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုရှာဖွေပါ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် နှင့်မည်သို့သင်ပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်မည်နည်း။
DutchtownSTL.org တွင်သင်လိုအပ်သည်ကိုဤနေရာတွင်ရှာမတွေ့ပါသလော။ ဆက်သွယ်ရန် ကျနော်တို့ကူညီဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပို့စာရင်းအတွက် sign up ကို Dutchtown မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုမွမ်းမံရန်။
ငါတို့ရပြီ Dutchtown မဲဆန္ဒရှင်များအတွက်အချက်အလက်များ အရေးကြီးသောရက်စွဲများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အချက်အလက်နှင့်မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်စသည်တို့ပါဝင်သည် Dutchtownstl.org/vote.
မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအားဖြင့် Dutchtown ကိုလှပအောင်ထားပါ cleanup ဖြစ်ရပ်များ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းပတ်ပတ်လည်။ အလည်အပတ် dutchtownstl.org/cleanup ကူညီရန်သင့်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရန်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများအားလုံးပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ Dutchtown န်းကျင်မှသတင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ပါ။
နောက်ထပ်သတင်းကိုရှာပါ dutchtownstl.org/news မှ
Dutchtown Main Streets ၏ 2021 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
အပေါ် Posted ဧပြီလ 17th, 2022
Dutchtown သည် 2020 ခုနှစ်တွင် ကပ်ရောဂါကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဇွဲလုံ့လဖြင့် ရှေ့ဆက်သွားသည်ကို မြင်တွေ့ရသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်နီးချင်းများ၊ DT2 · Downtown Dutchtown သည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို စည်းရုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းအသစ်များကို ကြိုဆိုခြင်း၊ တိုးတက်မှုများရရှိစေခြင်းအတွက် ကြီးမားသောခြေလှမ်းများဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Marquette ပန်းခြံ, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 2020 အကြောင်း ဤနေရာတွင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။.
"Dutchtown Main Streets' 2021 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ" ၏ကျန်များကိုဖတ်ပါ
Lutheran Development Group သည် စိန်ခေါ်မှုနောက်ထပ်ထောင့်တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသည်။
အပေါ် Posted မတ်လ 8th, 2022
Dutchtown အခြေစိုက် developer လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအတွက် အမြဲတက်နေပါသည်။ 2021 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် LDG နှင့် ၎င်းတို့၏ ပူးတွဲထုတ်လုပ်သူ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးထ ရံပုံငွေများ စုဆောင်းထားသည်ဟု ကြေညာသည်။ Marquette Homes ပရောဂျက်Dutchtown နှင့် Gravois Park ရှိ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေသော အဆောက်အဦ ၁၄ ခုနှင့် လစ်လပ်နေသော နေရာများတွင် တတ်နိုင်သော တိုက်ခန်း ၆၀ ကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ယင်းမတိုင်မီက ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံ ၁၅ လုံးကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ Chippewa ပန်းခြံစီမံကိန်း. ယခု ၎င်းတို့သည် 3025 Chippewa Street တွင် ကာလရှည်ကြာ ဒုက္ခရောက်နေသော အိမ်ရာကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါသည်။
“Lutheran Development Group မှ အခြားစိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း” ၏ကျန်များကို ဖတ်ရှုပါ။
Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Façade တိုးတက်မှုထောက်ပံ့ကြေး
အပေါ် Posted မတ်လ 7th, 2022
Dutchtown ပင်မလမ်းများ‘‘ဒီဇိုင်းကော်မတီနဲ့ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် သင့်ဆိုင်မျက်နှာစာအား မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးလိုပါသည်။ တွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ CID ခြေရာ ၎င်းတို့၏ လမ်းမျက်နှာစာ မျက်နှာစာများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ 500 အထိ ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ရှေ့တံခါးများသည် ဧည့်သည်များစွာအတွက် Dutchtown ၏တံခါးပေါက်များဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဝင်ပေါက်သည် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို ဆွဲဆောင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၏စရိုက်လက္ခဏာကိုပြသသည်။
Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Facade Improvement Grants ၏ကျန်များကိုဖတ်ပါ။
Dutchtown Dividend၊ အတွဲ ၁
အပေါ် Posted ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15th, 2022
Dutchtown စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်သော သတင်းလွှာဖြစ်သော Dutchtown Dividend ၏ ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုကို ကြိုဆိုပါသည်။ ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို သင့်အား ဆက်လက်ဖော်ပြရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။ Dutchtown ပင်မလမ်းများ နှင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း သင့်အား အသိပေးရန်။ ဤအပ်ဒိတ်များကို သင့်ဝင်စာပုံးတွင် ရယူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ info@dutchtownstl.org.
“The Dutchtown Dividend, Volume One” ၏ကျန်များကိုဖတ်ပါ။